Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Nọmba Ndị njem na -aga n'ihu na -ebili n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Okporo ụzọ gafere n'ọdụ ụgbọ elu Fraport Group niile mụbara nke ukwuu, ọnụ ọgụgụ ndị na-adị n'otu afọ na-abawanye site na ọtụtụ narị pasent-agbanyeghị dabere na oke okporo ụzọ belatara nke ukwuu na July 2020.
Omume dị mma na -aga n'ihu na -aga n'ihu.
FRA nabatara ụfọdụ ndị njem nde 2.85 na July nke 2021.
Tụnyere July 2020, ọnụ ọgụgụ ndị njem na -ebili bụ mmụba nke 115.8 pasent.
Mbupu ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na -ahụ uto siri ike, ọdụ ụgbọ elu Fraport Group n'ụwa niile na -agakwa n'ihu
Nọmba ndị njem na Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt (FRA) gara n'ihu na-ebili na July 2021. FRA nabatara ihe dị ka nde ndị njem nde 2.85 n'ọnwa mkpesa, na-anọchite anya oke ndị njem kwa ọnwa kemgbe ntiwapụ nke ọrịa Covid-19. Tụnyere July 2020, nke a bụ mmụba nke pasent 115.8. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ a dabere na ọnụ ahịa ala dị ala nke edere na July 2020, mgbe okporo ụzọ dara n'etiti ọnụego ọrịa coronavirus na -arị elu.
N'ime ọnwa mkpesa, obere ọrịa COVID-19 na ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nwere mmetụta dị mma n'ọchịchọ-ọkachasị maka ebe ezumike ọdịnala. N'ụbọchị kachasị elu, ọnụọgụ ndị njem na Frankfurt ruru ihe dịka pasenti 60 nke ọkwa ọrịa na-efe efe. Daybọchị kacha ekwo ekwo n'ọnwa mkpesa bụ July 31, mgbe ihe dị ka ndị njem 126,000 mere njem n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt - ọnụ ọgụgụ ndị njem kacha elu edekọtara n'otu ụbọchị kemgbe ntiwapụ nke ọrịa.
Tụnyere July 2019, okporo ụzọ ndị njem na FRA ka debara aha mbelata pasent 58.9 maka ọnwa mkpesa. N'ime oge Jenụwarị ruo Julaị 2021, ọdụ ụgbọ elu Frankfurt nabatara ihe dị ka nde ndị njem nde 9.3. Tụnyere otu oge ọnwa asaa na 2020 na 2019, nke a na-anọchite mbelata nke pasent 30.8 na pasent 77.0 n'otu n'otu.
Ụgbọ ibu na Frankfurt gara n'ihu na -eto ngwa ngwa, n'agbanyeghị ụkọ ike afọ nke ụgbọ elu ndị njem na -enye. N'ọnwa Julaị 2021, mbubata ụgbọ mmiri FRA (nke gụnyere ikuku na ozi ikuku) wulitere site na 30.0 pasent kwa afọ ruo 196,223 metric tọn. Tụnyere July 2019, ibu dị 9.8 %. Mmegharị ụgbọ elu rịgoro site na pasent 79.5 kwa afọ ruo 27,591 ụgbọ elu na mbata. Mkpokọta oke ịwepụ ihe (MTOWs) bilitere site na pasent 68.5 ruo ihe ruru nde tọn metrik 1.7 na July 2021.